सावधान ! यी ७ फल एकै साथ भुलेर पनि खानु हुँदैन, किन ? जानीराखौँ – Etajakhabar
सावधान ! यी ७ फल एकै साथ भुलेर पनि खानु हुँदैन, किन ? जानीराखौँ
फलफूल स्वास्थ्यको हिसाबले सबैभन्दा बढी लाभदायी हुन्छ तरपनि केही स्थितिमा यी फलहरू नै तपाईको लागी नोक्सानदायक सावित पनि हुनसक्छ । केही फल यस्ता छन्, जसको एकै साथ सेवन गर्नाले तपाई एवम् विशेषगरी बच्चाहरूका लागी ज्यादै खतरनाक सावित हुनसक्छ । यदी तपाई यसको विषालु प्रभावबाट बँच्न चाहनुहुन्छ भने कुन-कुन फलहरूलाई एकै साथ खानु हुँदैन, जान्नुहोस् ।
१- सुन्तला र गाँजर
हुनत: सुन्तला र गाँजरको मिक्स जूस बजारमा भिविन्न ठाउँमा मिल्न सक्छ तर यसले शरीरको लागी अमृतको होइन विषको काम गर्छ । यसको सेवनले शुरुवाती दिनहरूमा छाती पोल्ने, पित्त अत्यधिक हुनसक्ने र साथै यसको सेवन गर्नाले मृगौला पनि क्षतिग्रस्त हुन्छ जसका कारण विभिन्न गम्भीर परिणाम भोग्नु पर्दछ ।
२- अम्बा र केरा
अम्बा र केरा यी दुवै फलले ग्याँस र अम्लरक्तता बढाउने काम गर्छ । जसको एकै साथ सेवन गर्नाले गह्रौ महसूस हुने, अरूची, टाउको दुख्ने र पेटमा दुख्ने समस्याहरू हुन्छ ।
३- दुध र भुइँकटर
दुध र भुइँकटरलाई एकै साथ मिसाउनु हुँदैन र एकै साथ सेवन पनि गर्नुहुँदैन । यसमा ब्रोमेलेनको उपस्थितिले नसा र अल्छीपन उत्पन्न हुने, ग्यास्ट्रिक, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने र साथै इन्फेक्शन र डायरिया पनि हुनसक्छ ।
४- कागती र मेवा
यदी तपाई स्वादको लागी मेवामा कागतीको रस निचोरेर खानुहुन्छ भने यसले तपाईलाई एनीमियाको रोगी बनाउन सक्छ । यसले हीमोग्लोबिन सम्बन्धी समस्या पनि उत्पन्न गर्नसक्छ । यसको सेवन गर्नबाट बँच्नुहोस् । विशेषगरी बच्चाको लागी निकै खतरनाक हुन्छ ।
५- दुध र सुन्तला
यदी तपाई दुधबाट तयार गरिएको आहार वा दुधको साथमा सुन्तलाको जूस सेवन गर्नुहुन्छ भने यो तपाईको स्वास्थ्यको लागी निकै नोक्सानदायक हुन्छ । यी दुवैको मिश्रणले पाचनमा समस्या ल्याउँछ ।
६- फल र सब्जी
फल र सब्जीको एकै साथ सेवन गर्दा सधैँ नोक्सानदायक हुन्छ । फलमा ग्लूकोजको मात्रा अधिक हुन्छ तर सब्जीमा यस्तो हुँदैन । दुवैलाई एकै साथ सेवन गर्नाले फल चाँडो पच्ने हुन्छ र सब्जीको प्रक्रिया तबसम्म अधुरो हुन्छ जबसम्म फल पूर्ण रूपले पच्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पेट सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुनसक्छ, जस्तै: टाउको दुख्ने, इन्फेक्शन, पेट दुख्ने आदि ।
७- केरा र हलुवा
यो मिश्रणले पेटमा गह्रौ महसूस हुन्छ र मस्तिष्कको सक्रियतामा कमी ल्याउँछ र साथै विषाक्त तत्वको निर्माणलाई बढाउँछ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ समय: ९:०८:४२